YouTube मा अनुपयुक्त टिप्पणीहरू कसरी ह्यान्डल गर्ने? - YTpals
YouTube मा अनुपयुक्त टिप्पणीहरू कसरी ह्यान्डल गर्ने?
तपाईंले आफ्नो भिडियो बनाउन जतिसुकै प्रयास गर्नुभयो भने पनि, त्यहाँ सधैं मानिसहरूको एक गुच्छा हुनेछ, तपाईंका वफादार सदस्यहरू बाहेक, जसले तपाईंको काम मन पराउँदैनन्। तपाईं सबैबाट सकारात्मक टिप्पणीहरू आशा गर्न सक्नुहुन्न। तपाईले मात्र सबैलाई खुशी पार्न सक्नुहुन्न। यी मध्ये केही व्यक्तिहरू नकारात्मक वा अनुपयुक्त टिप्पणीहरू लिएर आउनेछन्, या त तिनीहरूको असहमति व्यक्त गर्न वा तपाईंको प्रतिष्ठा घटाउन। त्यहाँ विभिन्न तरिकाहरू छन् जसमा सिर्जनाकर्ताहरूले त्यस्ता मानिसहरूलाई अनलाइन ट्याकल गर्छन्, तर सबै भन्दा उपयोगी YouTube टिप्पणी सेटिङहरू हो।
YouTube टिप्पणी सेटिङहरू कहाँ छन्?
तपाईंले YouTube टिप्पणी सेटिङहरू परिवर्तन गर्ने ठाउँ YouTube स्टुडियो हो। यद्यपि, तपाइँलाई थाहा हुनुपर्छ कि तपाइँ टिप्पणी सेटिङहरू परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्न यदि
च्यानल वा भिडियो बालबालिकाका लागि हो (सेटिङलाई "बालबालिकाका लागि बनाइएको" मा परिवर्तन गर्दा टिप्पणीहरू सदाका लागि मेटिनेछन्)
भिडियो निजी हो
तपाईंसँग YouTube प्रयोग गर्नको लागि पर्यवेक्षित खाता छ।
पूर्वनिर्धारित टिप्पणी सेटिङहरू कसरी परिवर्तन गर्ने?
तपाईंले आफ्नो च्यानलको गृहपृष्ठ वा नयाँ भिडियोहरूमा अनुपयुक्त टिप्पणीहरूबाट बच्नको लागि पूर्वनिर्धारित YouTube टिप्पणी सेटिङहरू परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ पछ्याउने चरणहरू छन्:
YouTube Studio मा जानुहोस्।
बायाँ छेउको मेनुबाट "सेटिङ्हरू" चयन गर्नुहोस्।
"समुदाय" र त्यसपछि "पूर्वनिर्धारित" मा जानुहोस्।
आफ्नो पूर्वनिर्धारित सेटिङहरू छान्नुहोस् र "बचत गर्नुहोस्" मा क्लिक गर्नुहोस्।
तपाइँ यी चरणहरू पछ्याएर भिडियोको लागि टिप्पणी सेटिङहरू परिवर्तन गर्न पनि विचार गर्न सक्नुहुन्छ:
तपाईंको सामग्री पृष्ठमा जानुहोस्, जसले तपाईंको सबै भिडियोहरू देखाउँछ। यदि तपाइँ धेरै भिडियोहरूको लागि सेटिङ परिवर्तन गर्न चाहनुहुन्छ भने, तपाइँ बल्क सम्पादनहरूमा जान सक्नुहुन्छ।
बायाँ छेउको मेनुबाट "सामग्री" चयन गर्नुहोस्।
भिडियोको थम्बनेलमा क्लिक गर्नुहोस्।
"थप विकल्पहरू" मा क्लिक गर्नुहोस्।
"टिप्पणी र मूल्याङ्कनहरू" अन्तर्गत आफ्नो टिप्पणी सेटिङहरू चयन गर्नुहोस् र "बचत गर्नुहोस्" मा क्लिक गर्नुहोस्।
अरू के गर्न सकिन्छ?
तपाइँको YouTube टिप्पणी सेटिङहरू परिवर्तन गर्नु भनेको तपाइँको च्यानलको गृहपृष्ठ वा तपाइँको भिडियोहरूमा अनुपयुक्त टिप्पणीहरूबाट बच्नको लागि उत्तम तरिका हो। तर के हुन्छ यदि तपाइँको पृष्ठमा टिप्पणी पहिले नै आएको छ? यसलाई कसरी सामना गर्ने?
ठिक छ, तपाइँ टिप्पणी स्तरमा केहि चीजहरू गर्न सक्नुहुन्छ। पहिले, अनुपयुक्त टिप्पणी र यसले प्राप्त गरेका सबै जवाफहरू हटाउनुहोस्। तपाईंले टिप्पणीको छेउमा देखा पर्ने तीनवटा थोप्लाहरूमा क्लिक गरेर यो गर्न सक्नुहुन्छ। "हटाउनुहोस्" मा क्लिक गर्नुहोस् र यो स्थायी रूपमा मेटिनेछ। तपाईं YouTube स्टुडियोको "टिप्पणीहरू" ट्याबबाट पनि टिप्पणीहरू मेटाउन सक्नुहुन्छ।
तपाईले गर्न सक्ने अर्को कुरा अनुपयुक्त टिप्पणीलाई फ्ल्याग गर्नु हो। यो चरणले YouTube को नोटिसमा टिप्पणी ल्याउँछ, जसमा टिप्पणी दिशानिर्देशहरूको आफ्नै सेट पनि छ। यदि टिप्पणीले YouTube को सामुदायिक दिशानिर्देशहरूको प्रावधानहरू उल्लङ्घन गर्छ भने, त्यसपछि तपाइँ यसलाई प्लेटफर्मबाट हटाउने आशा गर्न सक्नुहुन्छ।
अन्तमा, तपाईंले अनुपयुक्त टिप्पणी पोस्ट गर्ने प्रयोगकर्तालाई लुकाउनु पर्छ। जब तपाइँ त्यसो गर्नुहुन्छ, विशिष्ट प्रयोगकर्तालाई तपाइँको भिडियो वा तपाइँको च्यानलमा कुनै पनि कारबाही गर्नबाट रोक लगाइन्छ। तपाइँले तपाइँको सेटिङ मा "समुदाय" ट्याबबाट टिप्पणी वा "समुदाय" बाट प्रयोगकर्तालाई रोक्न सक्नुहुन्छ।
YouTube अब के गर्दैछ?
YouTube टिप्पणी सेटिङहरूको अनुकूलन योग्यता सामग्री सिर्जनाकर्ताहरूको लागि ठूलो वरदान हो, तर प्लेटफर्मले आफ्नो समुदायको गोपनीयता र अखण्डताको रक्षा गर्न कुनै कसर बाँकी राखेको छैन। भर्खरै, YouTube ले घोषणा गर्‍यो कि यो एक नयाँ सुविधाको साथ आउँदैछ जसले टिप्पणीकर्ताहरूलाई एक कदम फिर्ता लिन र उनीहरूको घृणित टिप्पणीहरूमा पुनर्विचार गर्ने मौका दिनेछ।
नयाँ सुविधाले YouTube सिर्जनाकर्ताहरूको लागि हानिकारक, अनुपयुक्त टिप्पणीहरूबाट बच्नको लागि फिल्टर सिर्जना गर्ने सम्भावना पनि छ। यो सत्य हो कि सामग्री सिर्जनाकर्ताहरूले वर्षौंदेखि प्लेटफर्ममा टिप्पणीहरूको गुणस्तरको बारेमा गुनासो गरेका छन्। तर नयाँ सुविधाले यो लामो समयदेखिको चिन्ता र अतिरिक्त सिर्जनाकर्ताहरूलाई अनलाइन स्पेसमा कुनै पनि प्रकारको उत्पीडनलाई सम्बोधन गर्न सक्षम हुनुपर्छ।
YouTube टिप्पणी सेटिङहरूले तपाईंलाई धेरै हदसम्म अनुपयुक्त टिप्पणीहरूबाट बच्न मद्दत गर्न सक्छ। यद्यपि, तपाईलाई थाहा हुनुपर्दछ कि यो सम्पूर्ण अनुभवको अंश र पार्सल हो। तपाईंले त्यस्ता प्रयोगकर्ताहरूका लागि खुला हुनुपर्छ किनभने तिनीहरूले तपाईंलाई ठाउँको बारेमा वास्तविकता जाँच दिन्छन्। धैर्य राख्नुहोस् र आफ्नो राम्रो काम जारी राख्नुहोस्।
YTpals ले तपाईंलाई आफ्नो YouTube च्यानल बढाउन मद्दत गर्न सक्छ नि: शुल्क YouTube सदस्यहरू, दृश्य, र मनपर्ने। आज हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्।
YouTube मा अनुपयुक्त टिप्पणीहरू कसरी ह्यान्डल गर्ने? YTpals लेखकहरू द्वारा, 8 डिसेम्बर 2021
हालका वर्षहरूमा, डिजिटल मार्केटिंग कुनै पनि व्यवसायको प्रमोशनल प्रयासहरूको अधिक शक्तिशाली पक्ष भएको छ किनकि धेरै उपभोक्ताहरू इन्टरनेटमा निर्भर रहन जारी राख्छन्। जबकि त्यहाँ धेरै कम्पोनेन्टहरू हुन सक्छन् जुन…
जब यो भिडियो स्ट्रिमिङ प्लेटफर्महरूमा आउँछ, त्यहाँ यस समयमा YouTube भन्दा ठूलो कुनै पनि छैन। प्लेटफर्मले नवीन सामग्री सिर्जनाकर्ताहरूलाई आफूलाई मनपर्ने कुराहरू गरिरहन अनुमति दिएको छ, र यो निश्चित छ...
तपाइँको YouTube सामग्री अप्टिमाइज गर्न ह्यासट्यागहरूको अधिकतम कसरी बनाउने
धेरै व्यक्तिहरूले खोज इन्जिन अप्टिमाइजेसन प्रविधिहरू वेब पृष्ठहरूमा मात्र लागू गर्न सकिन्छ भनेर विचार गर्छन्। यद्यपि, त्यो सत्यबाट टाढा छ, किनकि खोज इन्जिन अप्टिमाइजेसन प्रविधिहरू कुनै पनि प्लेटफर्ममा प्रयोग गर्न सकिन्छ। ह्यासट्यागहरू…